Public Health in Myanmar: Screening Breast Cancer
Screening Breast Cancer
ရင်သားကင်ဆာ ရှိမရှိ ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်း
အခုရက်ပိုင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေး သတင်းတွေမှာ ရေပန်းစားနေတာကတော့ အမျိုးသမီးများ ရင်သားကင်ဆာ ရှိမရှိ ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းကို ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ စပြီး လုပ်သင့်တယ်၊ ဘယ်လောက်တစ်ခါ လုပ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ ဆက်ဆိုင်တဲ့ သုတေသန စာတမ်းတွေ၊ ထောက်ခံအကြံပြုချက်တွေကို ပြန်လည် တင်ပြပြီး ဒီအချက်အလက်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ဘယ်လို ဆက်စပ်နိုင်လည်း ဆိုတာကိုပါ ဆက်လက် ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်။ ဆွေးနွေးချက်က နည်းနည်းရှည်တော့ အနှစ်ချုပ်ကို အရင်ဖော်ပြပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန (U.S. Department of Health and Human Services) ရဲ့ ဌာနခွဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေး နဲ့ သုတေသန ဌာနခွဲ (Agency for Healthcare Research and Quality) က အရပ်ဖက် ပညာရှင်များ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ခု (U.S. Preventive Services Task Force) ဖွဲ့စည်းပေးပါတယ်။ ဒီအရပ်ဖက် ပညာရှင်တွေက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ စွက်ဖက်မှု၊ ကြိုတင်အဖြေထုတ်ပေးမှုတွေ မပါပဲ မိမိတို့ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သုတေသနပြုပြီး ရလဒ်ကို အများပြည်သူ သိရှိရအောင် ထောက်ခံအကြံပြုချက် အနေနဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ အခုလို ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အသက် ၅၀ မှ ၇၄ နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီးများ အားလုံး အနည်းဆုံး ၂ နှစ် ၁ ကြိမ် ရင်သားဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး စစ်ဆေးသင့်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အသက် ၄၀ မှ ၄၉ အတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့်မူ ပုံမှန် စစ်ဆေးရန်မလို။ အကယ်၍ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်သော မျိုးရိုးဗီဇ ရှိပါက ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်သင့်မရိုက်သင့်ကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီး ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အသက် ၇၅ နှစ်ကျော် အမျိုးသမီးများအတွက်မူ မည်သည့် ထောက်ခံအကြံပြုချက်မျှ မပေးနိုင်သေးပါ။ (သုတေသနပြုချက်များ ပြည့်စုံလုံလောက်မှု မရှိ။)
ဒီလို ထောက်ခံအကြံပြုချက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသူတွေ အတွက်သာ အဓိကဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံသူတွေ အနေနဲ့ ဒီအတိုင်း ထပ်ချပ် ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ရင်သားဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့ စက်နဲ့ ဓာတ်မှန်ဖတ်တတ်သူက မြို့တိုင်း နယ်တိုင်းမှာ မရှိပါ။ ရောဂါတွေ့လာလျှင် စနစ်တကျ ကုသပေးနိုင်တဲ့ ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံများကလည်း အကန့်အသတ်နှင့်သာ ရှိပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ကလည်း ထည့်စဉ်းစားစရာ အချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးများကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ရင်သားကင်ဆာဆိုင်ရာ သုတေသန ပြုချက်တွေ ပိုပြီး ထွက်ပေါ်လာစေဖို့နဲ့ သုတေသန တွေ့ရှိချက်တွေကို ပြည်သူအများ သိရှိနိုင်အောင် ချပြ ပြောဆိုဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။
ကင်ဆာတို့ မည်သည် မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင် လက်ဖြင့် မစမ်းသပ်နိုင်သော အရွယ်အစားလေးမှ တဆင့် စမ်းသပ်နိုင်သည့် အရွယ်အထိ ကြီးထွားလာသည့် သဘောရှိသည်။ ကြီးထွားနှုန်း အနှေးအမြန်မှာ ကင်ဆာ အမျိုးအစား တစ်ခုနှင့် တစ်ခု မတူပေ။ လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ် စမ်းသပ်နိုင်သော အဖုအကျိတ်အရွယ်ထိ ကြီးထွားလာနေပြီဆိုလျှင် အတော့်ကို အန္တရာယ်ရှိနေပေပြီ။ တဖန် အခြား ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများကိုပါ ပြန့်ပွားနေပြီဆိုလျှင် ကင်ဆာရောဂါ အဆိုးဆုံး အခြေအနေကို ရောက်နေပြီဟု ပြောလို့ရနိုင်သည်။
တကယ်လို့များ လက်ဖြင့် စမ်းသပ်နိုင်သည့် အဖုအကျိတ်အရွယ် မရောက်မီကပင် ကင်ဆာကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီး နည်းမှန်လမ်းမှန် ကုသနိုင်ခဲ့လျှင် အသက်ပိုရှည်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေက ကင်ဆာရှိမရှိ ကြိုတင် စစ်ဆေးဖို့ တိုက်တွန်းကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ‘ပေါ့စေလိုလို့ ကြောင်ရုပ်ထိုး ဆေးအတွက်လေး’ ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ကင်ဆာရှိမရှိ ကြိုတင်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းများကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်များကိုလည်း ထည့်တွက်သင့်သည်။
အမျိုးသမီးများ နှင့် ရင်သားကင်ဆာ
ရင်သားကင်ဆာသည် အမျိုးသမီးများတွင်သာ ဖြစ်နိုင်သလော။ မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသားများတွင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ ကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးသူ အမျိုးသမီးများ အနက် ရင်သားကင်ဆာက အဓိက တရားခံဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ အတွက်မူ လည်ချောင်းနှင့် အဆုတ်ကင်ဆာများက ဒုက္ခအပေးဆုံးပင်။ (WHO global burden of disease)
အဓိက စစ်ဆေးနည်း ၅ မျိုးမှာ -
သံလိုက်အားသုံး ဓာတ်မှန် – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
ရင်သား ဓာတ်မှန် – Film Mammography
ရင်သား ဒစ်ဂျစ်တယ် ဓာတ်မှန် – Digital Mammography
ဆရာဝန် စမ်းသပ်ခြင်း - Clinical Breast Examination
မိမိကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ခြင်း - Breast Self Examination
အခုလို ကြိုတင်စစ်ဆေးနည်းမှာ ဘယ်ဟာက ပိုသာလဲ ဆိုတာကို တွေ့ရှိနိုင်စွမ်း (sensitivity) နဲ့ တိကျမှု (specificity) ဆိုတဲ့ အချက် နှစ်ချက် နဲ့တိုင်းပါတယ်။
ကြိုတင်စစ်ဆေးနည်း တစ်ခုရဲ့ ‘တွေ့ရှိနိုင်စွမ်း’ ဆိုတာဟာ ကင်ဆာရှိနေသူ လူ ၁၀၀ ကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်လို့ အဲဒီအထဲက ဘယ်နှစ်ယောက်ကို ကင်ဆာရှိနေပါတယ် လို့ မှန်မှန်ကန်ကန် အဖြေထွက်လဲ ဆိုတာကို ကြည့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပေးရရင် ဗေဒင်ဆရာ တစ်ယောက်ကို ဗေဒင်သွားမေးတယ် ဆိုပါစို့။ ခင်ဗျားအိမ်မှာ သရက်ပင် ရှိတယ်လို့ ဟောတယ်။ အိမ်မှာ သရက်ပင်ရှိတဲ့ မေးသူ ၁၀၀ မှာ ဘယ်နှစ်ယောက်ကို မှန်အောင် ဟောနိုင်လဲ ဆိုတာ ‘တွေ့ရှိနိုင်စွမ်း’ ပါပဲ။ သတိချပ်ဖို့က တချို့မေးသူတွေအိမ်မှာ သရက်ပင်ရှိပေမယ်လို့ ဗေဒင်ဆရာက သရက်ပင်ရှိတယ်လို့ မဟောလိုက်နိုင်ဘူး။ (မသိတဲ့ အခါလည်း မသိဘူးပေါ့)
‘တိကျမှု’ ဆိုတာကျတော့ ကြိုတင်စစ်ဆေးနည်း အဖြေက ကင်ဆာ ရောဂါရှိတယ် လို့ အဖြေထွက်ပေမယ့် တကယ်တန်း လက်တွေ့မှာ အဲဒီလူအားလုံး ရောဂါရှိနေတာ မဟုတ်ပါ။ တချို့တလေမှာ ရောဂါ မရှိပါပဲနဲ့ ကြိုတင်စစ်ဆေးနည်းက ရောဂါရှိပါတယ်လို့ အဖြေထွက်လာတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ နဲ့ ရှင်းပြရရင် ဗေဒင်ဆရာက တစ်နှစ်အတွင်း ထီပေါက်မယ်လို့ ဟောလိုက်တယ်။ အဲဒီလို ထီပေါက်မယ်လို့ အဟောခံရတဲ့ လူ ၁၀၀ မှာ ဘယ်နှစ်ယောက်က တစ်နှစ်အတွင်း တကယ် ထီပေါက်သလဲ ဆိုတာဟာ ‘တိကျမှု’ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိချပ်ဖို့က ထီပေါက်မယ် အဟောခံရတိုင်း ပေါက်ချင်မှ ပေါက်တာ။ (မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့)
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းလမ်း ၅ မျိုးရဲ့ တွေ့ရှိနိုင်စွမ်း၊ တိကျမှုနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကုန်ကျစရိတ် ကို ဇယားနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ သံလိုက်အားသုံး ဓာတ်မှန် ၇၁ - ၁၀၀% ၈၁ - ၉၁% ဒေါ်လာ ၃၆၀၀ + စမ်းသပ်ခ
၂။ ရင်သား ဓာတ်မှန် ၇၇ - ၉၅% ၉၄ - ၉၇% ဒေါ်လာ ၈၅ + စမ်းသပ်ခ
၃။ ရင်သား ဒစ်ဂျစ်တယ် ဓာတ်မှန် ၇၇ - ၉၅% ၉၄ - ၉၇% ဒေါ်လာ ၁၃၅ + စမ်းသပ်ခ
၄။ ဆရာဝန် စမ်းသပ်ခြင်း ၄၀ - ၆၉% ၈၈ - ၉၉% စမ်းသပ်ခ
၅။ မိမိကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ခြင်း ၁၂ - ၄၁% - -
ရာခိုင်နှုန်းတွေကို နမူနာ ရှင်းပြရမယ် ဆိုရင် -
ရင်သားဓာတ်မှန်ရဲ့ ကင်ဆာ တွေ့ရှိနိုင်စွမ်း ၇၇ မှ ၉၅% ဆိုတာ၊ တကယ်တန်း ကင်ဆာ ရောဂါရှိတဲ့ အမျိုးသမီး ၁၀၀ ကို ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်ကြည့်ရင် ၇၇ ယောက်ကနေ ၉၅ ယောက်လောက်အထိရဲ့ ဓာတ်မှန်မှာ ကင်ဆာသဏ္ဍန်ကို တွေ့နိုင်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ခန့်မှန်းချေ ၅ ယောက်ကနေ ၂၃ ယောက်လောက်ကတော့ ရောဂါရှိနေလျက်နဲ့ ဓာတ်မှန်မှာ ရောဂါ တွေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တနည်း ပြောရရင် ဓာတ်မှန်မှာ ကင်ဆာ မတွေ့ဘူးဆိုတိုင်း ကင်ဆာ မရှိဘူးလို့ တတ်အပ် ပြောလို့ မရပါ။
တစ်ခါ တိကျမှု ၉၄ မှ ၉၇% ဆိုတာ ရင်သားဓာတ်မှန်မှာ ကင်ဆာသဏ္ဍန်တွေ့တဲ့ အမျိုးသမီး ၁၀၀ မှာ ၉၄ ယောက်ကနေ ၉၇ ယောက်လောက် အထိက တကယ် ကင်ဆာ ရှိကြပါတယ်။ တနည်း ပြောရရင် ဓာတ်မှန်မှာ ကင်ဆာ တွေ့တိုင်းလည်း ကင်ဆာ ရှိနေပြီလို့ သေချာပေါက် ပြောလို့ မရပါ။
ဒါဆို သေချာအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
ရင်သားဓာတ်မှန်ရိုက်လို့ ကင်ဆာ သဏ္ဍန် တွေ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီ ကင်ဆာ ဖြစ်နေတယ်လို့ သံသယရှိတဲ့ နေရာက အသားစ နမူနာယူပြီး ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးရပါမယ်။ အဲဒါမှ ကင်ဆာရှိမရှိ ပိုပြီး သေသေချာချာ သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရင်သားဓာတ်မှန်ရိုက်လို့ ကင်ဆာ သဏ္ဍန် မတွေ့ရင်လည်း နောက် ၂ နှစ်နေရင် တစ်ခါ ပြန်ရိုက်သင့်ပါတယ်။
အောက်ပါ ယူကျု ဗွီဒီယိုကို ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ စပြီးတော့ ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်သင့်လဲ
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဌာနခွဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေး နဲ့ သုတေသန ဌာနခွဲ က အရပ်ဖက် ပညာရှင်များ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ခု ဖွဲ့စည်းပေးပါတယ်။ ဒီအရပ်ဖက် ပညာရှင်တွေက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ စွက်ဖက်မှု၊ ကြိုတင်အဖြေထုတ်ပေးမှုတွေ မပါပဲ မိမိတို့ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သုတေသနပြုပြီး ရလာဒ်ကို အများပြည်သူ သိရှိရအောင် ထောက်ခံအကြံပြုချက် အနေနဲ့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဆက်ဆိုင်လို့ ထောက်ခံအကြံပြုချက် (Recommendation) ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းချင်ပါတယ်။ ထောက်ခံအကြံပြုချက်ဆိုတာ ဥပဒေနဲ့ မတူပါဘူး။ လိုက်လုပ်လည်း ရတယ်။ မလုပ်ချင်လည်း ရတယ်။ ကင်ဆာဆရာဝန် သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ကိုယ့်သမ္ဘာ နဲ့ကိုယ် ဆုံးဖြတ်ပြီး ပညာရှင်တွေရဲ့ ထောက်ခံအကြံပြုချက်ကို မလိုက်နာပဲ ကုပေးတာကို ဘယ်သူကမှ လာပြီး အပြစ်ပေးလို့ မရပါ။ ဘယ် ရဲ ကမှလည်း စောင့်ကြည့်မနေပါ။
ဒါပေမယ့် ဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ဒီကိစ္စမှာ ရင်သားကင်ဆာ ဆိုင်ရာ) တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်တွေက ဒီလို ဒီလိုတော့ဖြင့် လုပ်သင့်ပါတယ် ပြောထားလျက်နဲ့ ကိုယ်က လိုက်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ လူနာမှာ တစ်ခုခု နစ်နာ ဆုံးရှုံးသွားရမယ် ဆိုရင်တော့ နစ်နာမှုနဲ့ တရားစွဲတာ ခံရနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကိစ္စကတော့ တရားခွင်မှာ ဆက်ရှင်းပေါ့။
အရပ်ဖက်ပညာရှင်အဖွဲ့ဆိုတာမျိုးက အခုမှ ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါ။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်လောက် ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေ ပြောင်းရင်သာ ပြောင်းသွားမယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု သဘောတရားကတော့ မပြောင်းပါ။ ရင်သားဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး ရင်သားကင်ဆာ ရှာဖွေကြည့်ခြင်း ဆိုင်ရာ ထောက်ခံအကြံပြုချက်ကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်တုန်းက ဒီအဖွဲ့ကပဲ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ သုတေသန တွေ့ရှိချက် အသစ်တွေပေါ် အခြေခံပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် ထောက်ခံအကြံပြုချက်ကို ထုတ်တာပါ။ ဘာတွေကွာခြားလဲ ဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။
၄၀ - ၄၉ နှစ် ၁ နှစ် (သို့) ၂ နှစ် လျှင် တစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်သင့်သည်။ ရင်သားဓာတ်မှန် ပုံမှန် ရိုက်စရာမလို။ လူတစ်ဦးချင်း အနေအထားပေါ် မူတည်၍ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကာ လိုအပ်မှ ရိုက်သင့်သည်။
၅၀ - ၇၄ နှစ် ၁ နှစ် (သို့) ၂ နှစ် လျှင် တစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်သင့်သည်။ ၂ နှစ် ၁ ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်သင့်သည်။
၇၅ နှစ် အထက် ၁ နှစ် (သို့) ၂ နှစ် လျှင် တစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်သင့်သည်။ သုတေသနပြုချက်များ လုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် အတတ်မပြောနိုင်။
၂၀၀၉ ထောက်ခံအကြံပြုချက်မှာ ပါတဲ့ နောက်အချက် တစ်ခုကတော့ MRI, Digital Mammography နဲ့ ဆရာဝန် စမ်းသပ်တာတွေ အတွက်ကိုတော့ မည်သို့မျှ မပြောလိုကြောင်း၊ သုတေသန ပြုချက်များ မလုံလောက်ကြောင်း ပါရှိပါတယ်။ ‘မိမိကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခြင်း’ နည်းလမ်းကိုတော့ ကြိုတင်စစ်ဆေးမှုအတွက် အသုံးမပြုသင့်ကြောင်း ပြောထားပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီလို ထောက်ခံအကြံပြုသလဲ
ရင်သားကင်ဆာကြောင့် အသက်သေဆုံးရမှု လျှော့ကျစေဖို့ကို အဓိကရည်ရွယ်ပြီး ဒီလို ထောက်ခံအကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် အရပ်ဖက် ပညာရှင်အဖွဲ့က အခြားသုတေသီတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှတွေကို စနစ်တကျ လေ့လာပြီး အနှစ်ချုပ်ရလဒ်ကို ကြည့်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသူတွေရဲ့ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနှုန်း၊ ရောဂါအပြင်းအပျော့၊ ကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်း စတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကွန်ပျူတာထဲ ထည့်သွင်းပြီး ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်တာက ရင်သားကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်းကို လျှော့ချပေးနိုင်လဲ ဆိုတာကို ဆန်းစစ်ပါတယ်။
ဒီဆန်းစစ်ချက်တွေအရ အသက် ၅၀ ကနေ ၆၉ နှစ်အတွင်း ရှိ အမျိုးသမီးများကို ၂ နှစ် ၁ ကြိမ် ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်တာက ရင်သားကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်းကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှော့ချနိုင်ပြီး၊ မလိုအပ်ပဲ အသားစယူခံရမှု အနည်းဆုံး ဆိုတာ တွေ့ပါတယ်။ အသက် ၄၀ နဲ့ ၅၀ ကြား အမျိုးသမီးတွေကိုပါ ၂ နှစ် ၁ ကြိမ် ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်ပြီး စစ်ဆေးမယ် ဆိုရင်တော့ ရှားရှားပါးပါး တစ်ယောက် တစ်လေရဲ့ အသက်ကို ထပ်ပြီး ကယ်တင်ကောင်း ကယ်တင်နိုင်ပါမယ်။ ဒီလို အသက်တစ်ချောင်း ကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် လူ ၁၃၀၀ လောက်ကို ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်ပြီးစစ်ဆေးဖို့ လိုပါမယ်။ ရင်သားဓာတ်မှန် ၁၂၉၉ ကြိမ် (တန်ဖိုးအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁ သိန်း ၃ သောင်းဖိုးလောက်) က အပိုရိုက်ရသလို ဖြစ်နေတယ်။ အကြမ်းဖျင်း ပြောကြေးဆိုရင် အသက်တစ်ချောင်းက ဒေါ်လာ ၁ သိန်း ၃ သောင်း တန်တယ် ဆိုပါစို့ရဲ့။ စာရှုသူဆိုရင် ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မလဲ။
ဒီ ထောက်ခံအကြံပြုချက် ထွက်ပေါ်အပြီးမှာ အမေရိကန် ရုပ်မြင်သံကြားတွေက ရင်သားကင်ဆာ ဝေဒနာရှင် အမျိုးသမီး တစ်ချို့နဲ့ တွေ့ဆုံပါတယ်။ ကာယကံရှင်တွေ ပြောတာက သူတို့တွေ အသက် ၄၀ ကျော် ၅၀ မတိုင်မီအရွယ်တုန်းက ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်လိုက်မိလို့သာ ကင်ဆာကို စောစောတွေ့ပြီး အသက်ရှင်နိုင်တာပါတဲ့။ မှန်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်း အနေနဲ့ ဒီလို အတွေ့အကြုံမျိုးကတော့ ရှိမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ရုပ်မြင်သံကြားမှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခံရတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ရှိရင်၊ သူ့လိုပဲ အသက် ၅၀ မတိုင်ခင် ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်ပြီး ကင်ဆာမရှိပါပဲ ကင်ဆာရှိတယ်လို့ မှားပြီး သတ်မှတ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးက ၈၈ ယောက် ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ၈၈ ယောက်မှာတော့ မလိုအပ်ပဲ အသားစယူ စစ်ဆေးတာ ခံခဲ့ရမှာပါ။ ဒီလို မှားယွင်းပြီး အသားစယူခံရတဲ့ အမျိုးသမီး တွေကိုတော့ ရုပ်မြင်သံကြားတွေက တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း မပြုပါဘူး။
အခု ထောက်ခံအကြံပြုချက်ဟာ သိပ္ပံနည်းကျ စနစ်တကျ သုတေသနပြုပြီး ရလာတဲ့ အချက်အလက်တွေပေါ်မှာ အခြေခံ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေး ပေါ်လစီ ချမှတ်တဲ့ အခါမှာ သိပ္ပံနည်းကျတာ မကျတာ တစ်ချက်တည်းနဲ့ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေပြု အမတ်တွေကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည်သူလူထုက မကြိုက်ရင် သိပ္ပံနည်း ဘယ်လို ကျနေနေ အမတ်တွေ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်က ရင်သားဓာတ်မှန်ကြောင့် အကျိုးဖြစ်နေသူတွေ (ဥပမာ ဓာတ်မှန်စက် တီထွင်သူတွေ၊ ဓာတ်မှန်စက် ထောင်သူတွေ၊ ဓာတ်မှန် ဆရာဝန်တွေ) လည်း အများအပြားရှိသေးတော့ သူတို့ရဲ့ အမြင်တွေကလည်း ဥပါဒါန် မကင်းနိုင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး လူတွေ မပြောချင်ကြပေမယ့် မပြောမဖြစ်ပြောရမယ့် ကိစ္စက ငွေရေးကြေးရေးပါ။ ‘ငွေဘယ်လောက်ကုန်ကုန် ကုလိုက်မယ်’ ဆိုတာ စကားအဖြစ်သာ ရှိပါတယ်။ တကယ်တန်းမှာ မိသားစုတိုင်း၊ မိသားစုတိုင်း ငွေကြေးတတ်နိုင်မှုပေါ် မူတည်ပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ကို သုံးကြရပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ တိုင်းပြည်က ဘယ်လောက် ချမ်းသာနေလဲ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လောက် ငွေအကုန်ခံနေလဲ ဆိုတဲ့ အချက်တွေဟာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေပါ။
မြန်မာအမျိုးသမီးများနဲ့ ဘယ်လို သက်ဆိုင်မလဲ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်အရကတော့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေမှာ ရင်သားကင်ဆာဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဒုတိယ ဒုက္ခအပေးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒီလိုဆိုတော့ အရှေ့တောင်အာရှထဲမှာ ပါတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်း အရေးကြီးတာပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ရင်သားကင်ဆာ ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်း ကိစ္စကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်နေပြီလို့တော့ မကြားမိသေးပါ။ စာရေးသူတို့ ဆေးကျောင်းသား ဘ၀ကများဆိုရင် ရင်သားကင်ဆာ ဝေဒနာရှင်တွေဟာ အဖုအကျိတ် အတော်ကြီးကို ကြီးမှ ဆေးရုံရောက်လာကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ရောဂါကျွမ်းမှ ရောက်လာတာပေါ့။ ကုသရလည်း ခက်ခဲသွားပြီး အသက်ရှင်ဖို့လည်း မလွယ်တော့ပါ။
ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာတော့ မြို့ကြီးတွေမှာ ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်လို့ ရနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မြို့တိုင်းမှာတော့ မရသေးပါ။ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတရှိသူ ဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့ နီးစပ်သူများကတော့ ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာတွေ ရှိလာနေပါပြီ။ တစ်ဖက်မှာလည်း ရင်သားဓာတ်မှန်ရိုက်တယ် ဆိုတာကို ဘာမှန်း မသိသူများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အရွယ်ရောက်တဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီးတိုင်း ရင်သားကင်ဆာ ဗဟုသုတ ရှိနေဖို့ အတော်အားထုတ် လုပ်ဆောင်ရပါဦးမယ်။
ဖော်ပြပါ သုတေသန ပြုချက်တွေဟာ အမေရိကန် အမျိုးသမီးတွေကို အဓိကထား စဉ်းစားထားတာဖြစ်လို့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေမှာ လည်း ဒီလိုအခြေအနေရှိမယ်လို့ တပ်အပ် မပြောနိုင်ပါ။ မြန်မာအမျိုးသမီးများမှာ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း၊ ရောဂါအမျိုးအစား၊ အနုအရင့် စတာတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ သုတေသန ပြုချက်တွေ လိုပါမယ်။
ကဲ စာရေးသူရေ ဝေ့၀ိုက်မနေပါနဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို ဘယ်လို အကြံပေးမလဲ ဆိုရင်တော့ …
အသက် ၄၀ ကျော်ပြီး မိသားစု (မိခင်၊ အဒေါ်၊ ညီမ၊ အစ်မ) မှာ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ဖူးရင်
အသက် ၄၀ ကျော်ပြီး ရင်သားမှာ နဂိုကမရှိတဲ့ အဖုအကျိတ် ရှိလာပြီလို့ သံသယရှိရင်
အသက် ၅၀ ကျော်ပြီး ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်ဖို့ အဆင်ပြေရင် (မိမိနေတဲ့မြို့မှာ ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်လို့ရရင်)
နီးစပ်ရာ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်များနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ရင်သားဓာတ်မှန် ရိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်း ၂ နှစ် ၁ ကြိမ် ပုံမှန် စစ်ဆေးဖို့ရာလည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
သိချင် ဆွေးနွေးချင်တာများရှိရင် မှတ်ချက်မှာ ရေးသားပေးခဲ့ပါ။ စီဘောက်မှာ ဆွေးနွေးရတာ အဆင်မပြေလို့ပါ။
အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ
Mandelblatt et al. Effects of Mammography Screening Under Different Screening Schedules: Model Estimates of Potential Benefits and Harms. Ann Intern Med. 2009;151:738-747.
Nelson et al. 2009. Screening for Breast Cancer: An Update for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2009;151:727-737.
Screening for Breast Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. U.S. Preventive Services Task Force*. 2009. Ann Intern Med. 2009;151:716-726.
U.S. Preventive Services Task Force’s recommendation on Screening for Breast Cancer. 2002. Retrieved from http://www.ahrq.gov/clinic/pocketgd09/gcp09s2.htm#BreastScreening on November 19, 2009.
U.S. Preventive Services Task Force’s recommendation on Screening for Breast Cancer. 2009. Retrieved from http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspsbrca.htm on November 19, 2009.
WHO. 2006. Global disease burden 2004 update.
Labels: Breast, Cancer, Screening
ကောင်းတယ်ဆရာ။ ဘာသာပြန် တင်ပေးတာတင် မကဘဲ ကိုယ့်ပြည်က လူနာတွေ အတွက်ပါ ထည့်ရေးလို့ ပိုကောင်းတယ်။
“ အကယ်၍သာ “
Myanmar Medical Council
တရားမျှတမှုနှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
ပြုစားခံရနေရခြင်းမဟုတ်သော Down's Syndrome
Migraine ဆိုတဲ့ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တဲ့ ရောဂါ
သွေးအားနည်းရောဂါ ( Anemia )
နှာခေါင်းသွေး လျှံခြင်း (Epistaxis)
ကြွက်နို့ဟု ခေါ်သော Wart ရောဂါ
ဆေးလိပ်သောက်သူများ အတွက် ဘားဂါး (Buerger) ရောဂါ